आईपीएलमा आज पञ्जाव र राजस्थान भिड्दै — Sanchar Kendra
१विमानस्थलमा पत्रकारसँग नेपालीमै बोल्दै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धनले के भने ?
२नेपाली बजारमा आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? घट्यो कि बढ्यो
३त्रिशूली भ्यान दुर्घटना अपडेट- बेपत्तामध्ये दुईकाे शव भेटियाे
४बिरामी बोकेको पिकअप भ्यान त्रिशूलीमा खस्यो, ३ जना बेपत्ता
५विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढ्यो
६महान अर्जेन्टिनी फुटबल हस्ती म्याराडोनाको निधनले स्तब्ध बने पेले, भावुक हुँदै गरेको ट्वीट भाइरल
७सम्पर्कविहीन डिएसपी होटलभित्र यस्ताे अवस्थामा युवतीसँग रंगेहात समातिएपछि…
८कोरोना संक्रमित देशहरुका लागि अहिलेसम्मकै डरलाग्दो खबर, बिश्वभर हलचल, अब के गर्लान भारत र अमेरिका ?
९सांसद दीपक मनाङ्गेकी श्रीमती पक्राउ, गरेकी रैछन् यस्तो घिनलाग्दो काम
१०कोरोना संक्रमणबाट एमसीए नेपालका इन्जिनियरको मृत्यु भएपछि अमेरिकी राजदूत बेरीले गरे यस्तो ट्वीट
११नेप्से परिसूचक ६४ अंकले बढ्यो, होटल बाहेक सबै हरियाली
१२विराटनगरमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप चार संक्रमितको मृत्यु
एजेन्सी । युएईमा जारी १३औँ संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा आज किङ्स इलाभेन पन्जाब र राजस्थान रोयल्सबीच खेल हुँदैछ । प्ले अफ दौडमा रहेका पन्जाब र राजस्थान दुबैलाई जित्नै पर्ने दबाब छ ।
आबुधाबीमा खेल्नेछ । पन्जाब र राजस्थानबीचको खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका ७:४५ बजे सुरु हुनेछ । शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा पन्जाब सातौँ जितको खोजीमा हुनेछ । पन्जाब १२ खेलमा १२ अंक जोड्दै तालिकाको चौंथो स्थानमा रहेको छ ।
केएल राहुलको कप्तानीमा मैदान उत्रने पन्जाब राजस्थानलाई हराएर प्ले अफ यात्रा बलियो बनाउन चाहन्छ । पछिल्लो खेलमा पन्जाबले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्तै पन्जाब राजस्थानसँग अघिल्लो खेलमा व्यहोरेको हारको बदला समेत लिन चाहन्छ । यसअघिको भेटमा पन्जाबलाई राजस्थानले ४ विकेटले हराएको थियो ।
स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थानलाई भने पन्जाबविरुद्धको खेल महत्वपूर्ण रहेको छ । प्ले अफको सम्भावना कायम राख्न पनि राजस्थानलाई जितको विकल्प छैन । १२ खेलमा १० अंक जोडेको राजस्थान सातौं स्थानमा रहेको छ ।